Gadiidka shaqaalaha Xukuumadda Soomaaliya oo laga mamnuucay wadooyinka qaar ee Muqdisho – Somali Top News
August 15, 2019 Somali Top News	0 Comments
Waxaa si ku meel gaar ah loo joojiyay in wadada horumarta madaxtooyada Soomaaliya lagu soo maro aqoonsiyada wasaaradaha xukuumadda Soomaaliya, gaar ahaan shaqsiyaadka wata gaadiidka nuucyadiisa kale duwan.
Mas’uuliyiin ka tirsan shaqaalaha dowladda oo wata gaadiidka raaxada ayaa sheegay in laga soo billaabo dorraad ilaa maanta la diiday in wadadaasi ay hormaraan gaadiidka shaqaalaha dowladda.
Dhammaan wadadan hormarta madaxtooyada Soomaaliya lagama mamnuucin gaadiidka balse waxa kaliya laga diiday in ay ka soo galaan kontaroolka Godka Jilacow lamana oga sababta arintaan keentay.
Lama filayo in go’aankaan uu ka soo baxay ciidamada Koofiya Casta ee madaxtooyada balse waxaa la aaminsan yahay in uu yahay amar kale oo ka yimid hey’adaha ammaanka Soomaaliya islamarkaana ay qaadan doonto dhowr maalmood.
Warar kale ayaa sheegayaa in ay jirto digniin dhanka ammaanka ah oo ay soo saareen saraakiisha amaanka Soomaaliya, taas oo sheegeysa in Al-Shabaab ay qorsheeyeen in ay weerar ku qaadaan xarunta Godka Jilacow ama kontaroolka laga galo Godka Jilacow ee taalada Daljirka Daahsoon.
Shaqaalaha wasaaradaha dalka ee gaadiidka wata ayaa maanta iyo shalay ka soo wareeganayay dhanka Ceel-Gaabta waxaana dhacda in waqtiyada qaar halkaasi loo diido.
Al-Shabaab ayaa hore weerar qarax ismiidaamin ah loo adeegsaday waxay ugu qaadeen kontaroolka Godka Jilacow iyagoo halkaasi ku dilay dad badan oo shacab ah, waxaana dadkaasi ku jiray Faadumo Cali Raage oo ka tirsaneyd saraakiisha milateriga Soomaaliya.
← Xildhibaano katirsan Aqalka Sare oo faragelin ku haya doorashada Jubbaland
Sawirro: Ra’isul Wasaaraha oo Isbitaalka ku booqday Askartii ku dhaawacantay weerarkii Al shabaab →
Shacabka Reer Jabuuti Oo Laga Daad Gureeyay Magaalada Diridhabe
August 7, 2018 Somali Top News 0
Madaxweynaha Galmudug oo xaqiijinaya nabad galyada deegaanada maamulkiisa
Wafdi ka socda Aqalka Sare oo kulan la qaatay Madaxda Hirshabelle